Fantaro i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Fantaro an'i Jesosy
Matetika ny resaka hahafantarana an'i Jesosy. Ny fomba hanaovana izany anefa toa somary malalaka sy sarotra ihany. Natao indrindra izany satria tsy afaka mahita azy isika na miresaka mifanatrika. Tena misy izy io. Nefa tsy hita na tsy azo zahana io. Tsy afaka mandre ny feony koa isika, afa-tsy angamba amin'ny tranga tsy fahita firy. Ahoana ary ny fomba hahalalantsika azy?
Tato ho ato dia mihoatra ny loharano iray no nifantohan'ny saiko hitady sy hahafantatra an'i Jesosy ao amin'ny Filazantsara. Matetika, toa anao, dia namaky azy ireo aho ary nanatrika kilasy fianarana any amin'ny oniversite antsoina hoe Harmony ao amin'ny Filazantsara. Saingy nandritra ny fotoana kelikely dia nifantoka tamin'ny boky hafa aho - indrindra ny taratasin'i Paul. Natao tsara izy ireo mba hitarihana olona hiala amin'ny fanavakavahana sy ho amin'ny fahasoavana.
Ho fomba hanombohana ny taom-baovao dia nanolo-kevitra ny pasitera ny famakiana ny Filazantsaran’i Jaona. Rehefa nanomboka namaky azy aho dia nanaitra ahy indray ny zava-nitranga tamin'ny fiainan'i Jesosy araka ny noraketin'i Jaona. Avy eo nanao lisitra ny tenin'i Jesosy aho momba ny hoe iza izy ary iza izy avy amin'ireo toko 18 voalohany. Nitombo lavitra noho ny nataoko an-tsaina ny lisitra.
Avy eo, nanome baiko boky iray izay te-hamaky aho nandritra ny fotoana elaela - Manomeza ahy fotsiny Jesosy nataon'i Anne Graham Lotz. Nohaingoin'ny Filazantsaran'i Jaona izany. Na dia novakiako ampahany ihany aza izy io, efa nahazo vina vitsivitsy aho.
Tao amin’ny iray amin’ireo fandaharan’asa fampaherezam-panahy isan’andro, dia nilaza imbetsaka ny mpanoratra fa ny fandalinana ny Filazantsara dia fomba tsara “hitiavana hatrany ny fiainan’i Kristy” (John Fischer, The Purpose Driven Life Daily Devotional) boky fampaherezam-panahy isan’andro].
Toa misy olona te hiresaka amiko!
Rehefa nangataka an’i Jesosy i Filipo mba hampiseho amin’izy ireo ny Ray (Jaona 14,8), hoy izy tamin’ny mpianany: “Izay mahita Ahy dia mahita ny Ray!” (V. 9). Izy no endrik’Andriamanitra izay maneho sy maneho ny voninahiny. Koa raha afaka 2000 taona na mihoatra no ahafantarantsika an’i Jesosy amin’izany fomba izany, dia fantatsika koa ny Ray, ilay Mpamorona sy Mpanome ny aina sy izao rehetra izao.
Tsy takatry ny saintsika ny hoe voafetra ihany isika, ny olona mety maty izay noforonina tamin'ny vovoky ny tany dia afaka manana fifandraisana manokana sy ilay Andriamanitra tsy manam-petra sy tsy manam-petra ary hahafantatra azy. Fa afaka. Noho ny fanampian'ny Filazantsara, dia afaka mihaino ny resaka ataony isika ary mijery ny fomba nifandraisany tamin'ny mahantra sy ny olona ambony, ny jiosy ary ny tsy jiosy, ary koa mpanota sy lehilahy marina, lehilahy, vehivavy ary ankizy. Hitantsika ny maha-olombelona an'i Jesosy - ny fihetseham-pony sy ny heviny ary ny fihetseham-pony. Hitantsika ny halemem-pony amin'ny fifandraisany amin'ny ankizy izay notahiny sy ampianariny. Hitantsika ny fahavinirany amin'ireo mpivarotra vola sy ny maharikoriko azy amin'ny fihatsaràn'ny Fariseo.
Ny Filazantsara dia mampiseho antsika roa an'i Jesôsy - amin'ny maha-Andriamanitra sy amin'ny maha-olona azy. Izy ireo dia mampiseho antsika amin'ny maha zazakely sy olon-dehibe, lahy sy anadahy, mpampianatra sy mpanasitrana, iharan'ny velona sy mpandresy tafakatra.
Aza matahotra hahalala an'i Jesosy, ary aza misalasala raha tena misy izany. Vakio fotsiny ny Evanjely dia raiso fitiavana indray miaraka amin'ny fiainan'i Kristy.